I-Sony PRS-T1 Vs Sony PRS-T2 | Onke ama-eReaders
AmaVillamandos | | izinkampani, Sony
Emasontweni ambalwa edlule, abakwaSony bethule ukuthi iyiphi i- inguqulo yesibili ye-e-reader yakhe ephumelelayo ayibize ngePRS-T2 ekuqhubekeni kwegama oselivele walakhela igama le- inguqulo yokuqala yedivayisi yakho nokuthi izuze impumelelo yokuthengisa ehlaba umxhwele futhi futhi yazuza nezinga eliphezulu lokwaneliseka phakathi kwabo bonke labo abathathe isinqumo sokuyithenga. Namuhla sithenge i-PRS-T2 entsha nomanduleli wayo, i-PRS-T1 lokho kusesemakethe etholakalayo ukuthengwa nokuthi ekuboneni kokuqala kubonakala kufana ncamashi nemodeli entsha yize kunentengo ephansi futhi kwesinye isikhathi kudida abathengi, ngoba cha, abafani ngokuya ngokusebenza.
Phakathi kokufana singathola ifayela le- efanayo electronic ink uhlelo (E-Ink Pearl), inani elifanayo lememori yangaphakathi kanye nekhono lokufunda amafomethi e-e-book ahlukile. Izilinganiso ziyefana kakhulu, futhi isisindo sihlala singama-gram ayi-167 uma kuqhathaniswa no-168 wemodeli yangaphambilini, cishe ongatholakali ngaphandle kokuthi sibabeka esikalini.
Umehluko omkhulu wokubuka esizowuthola phakathi kwePRS-T1 nePRS-T2 ukwakheka kwawo, okushintshe kancane, ikakhulukazi endaweni yezinkinobho lapho sizothola khona ushintsho kwisitayela sabo. Lapho sesiqale ukusebenzisa i-e-reader entsha yakwaSony sithola izindaba ezilandelayo:
Ijubane ledivayisi selithuthukisiwe futhi kule PRS-T2 entsha evula ikhasi, ukusondeza isithombe noma ukuhambisa phakathi kwamamenyu kuzoshesha ngandlela thile kunakwimodeli yangaphambilini, i-PRS-T1
Ukuhlanganiswa nohlelo oludumile lwe-Evernote futhi lokho kuzosivumela, isibonelo, ukugcina i-athikili kulolu hlelo lokusebenza futhi sitholakale ukuthi sifunde ku-Sony PRS-T2 yethu. Ngendlela efanayo, uma sibhala inothi ku-e-reader yethu sizoyithola ku-akhawunti yethu ye-Evernote
Ithuba lokwabelana kuFacebook izindima ezahlukahlukene zalokho esikufundayo ngaleso sikhathi
Mhlawumbe okuwukuphela kwento esingakuphuthelwa yile-e-reader entsha yakwa-Sony yi ukungabikho kwesidlali seMP3 ebesinaso ngohlobo lwePRS-T1 futhi lokho sekunyamalale ku-PRS-T2 ngokusho kwemithombo yakwaSony ukugwema ukusetshenziswa ngokweqile kwebhethri.
Isidlali seMP3 noma singenayo, i-e-reader entsha ye-Sony ithuthuke kakhulu maqondana nokusebenza futhi ngokungangabazeki ingenye yamadivayisi ahamba phambili emakethe futhi inenani elingaphezu kwelifanele.
Imininingwane engaphezulu - I-Sony eReader PRS-T1, izibuyekezo nokuvelayo
Umthombo - AmaSony.es
Indlela ephelele ye-athikili: Onke ama-eReaders » izinkampani » Sony » Ukuqhathanisa: I-Sony PRS-T1 Vs Sony PRS-T2
Umama une-pink Sony PRS-T1 futhi ujabule kakhulu. Akakwazanga ukuvivinya imodeli entsha kodwa okwamanje endala isebenza njengentelezi.
I-athikili enhle kakhulu!
Leyo modeli yinhle nesembozo sombala ofanayo sihle.
Umehluko osuka kwimodeli yokuqala uye kwesesibili uyabonakala kepha owokuqala wamadivayisi namanje uyithuluzi elihle kakhulu.
Ngine-sony prs t-1 futhi okuwukuphela kwento engekho isichazamazwi es-es. Ngaphandle kwalokho icishe iphelele.
Sicabanga ukunikela ngomamezala wami i-Sony PRS-T2, wayibona nomngani wakhe futhi waqiniseka impela.
Kodwa-ke, phakathi kwalokhu no-Kindle angiqiniseki ukuthi iyiphi ebaluleke kakhulu, ngaphandle kwentengo yezinzuzo nokusetshenziswa, uma kungenzeka ithole konke ukusebenza.
Uma lokhu kungcono kune-kindle kepha kungakhanyi ngaphezu kokufunda, isikhathi angazi ukuthi umehluko wentengo unengqondo yini.
Noma yimuphi umbono wokunginika ikhebuli?
Ngiyacela, umuntu enze izikrini eziyi-8 noma eziyi-9 intshi ku-eink, okuyisithupha kuyahlekisa, awushiyi ukubona kwakho nge-tft futhi uyishiya ikuphoqa ngoprinta oluncane kanye nama-satos alayini njalo njengoba blinks kuyinto engenangqondo
U-Irene Benavides kusho
Othile uyazenza. Kule bhulogi efanayo unezindatshana ezimayelana ne-92 ″ Onyx Boox M9,7 noma iTagus Magno, yesilinganiso esifanayo (ukunikeza izibonelo ezimbalwa).
Kepha, unezinye izinketho (okunye okunqanyuliwe kepha okufinyelelekayo kwesekeni): Kindle DX, iPocketBook Pro… Kuyindaba yokusesha.
Phendula u-Irene Benavides
Sawubona, ngicela ukungazi kwami ​​nangokungazi ngokuphelele. Uma unethuba lokuzithenga zombili, ingabe i-T2 ingcono kune-T1? Endabeni yami ethile, i-mp3 ingeyesibili, ku-T2 ungazisusa futhi ufunde izincwadi ze-Kindle ngayo?. Ngiyabonga
Funda imibono yakamuva. Ngikufisela okuhle.
umuthi we-fir kusho
Uma i-t2 ishesha kune-t1, kuzoba lapho iqala, ukuvula ikhasi nokufinyelela kwemenyu kushesha nje.
I-T2 isicupho se-booby njengomqhele wesihlahla sikaphayini. Babedinga ukukhipha okuthile okusha futhi basebenzise isoftware efanayo, besusa izici futhi baqhubeka nokukhawulela ukuxhumana nezinhlelo ezahlukahlukene zokulayisha, njenge-Adobe Digital Editions. Okuwukuphela kwento enhle ngayo ukuthi ifreyimu iyi-matte kunokuba icwebezele, kungenjalo kubi kakhulu.
Awunawo okokufaka komculo noma we-sd futhi uma ubuyekeza i-firmware, ubushiqela bakwaSony buvimbela ukhula lwenkohlakalo egcwele.
Umbuzo enginawo wokuthi ngilahlekelwe ibhokisi futhi angizazi izici ze-t1, unganginikeza zona ukuthi ngifuna ukuzithengisa futhi ngiyazidinga lezi ezintsha, ngiyilungiselela kuphela uma unentshisekelo ukungibhalela ngiyabonga
Nginenkinga ngifaka i-password futhi angiyikhumbuli futhi ngeke ingivumele ngingene kwimenyu, ngiyazama ukuyifometha kepha ayivumi ukuthi ngenze noma yini. Yini engingayenza?
Tutorial jailbreak Kindle Touch usebenzisa ifayela elilodwa le-MP3